Jun 14, 2010 na 9:01 nke ụtụtụ
Ọ dị mwute, mana eziokwu site n'ihe m hụworo.
Ọbụna nha, akụkụ akụkụ, na ntinye na saịtị ahụ na-eme ka ọ dị iche… err, yabụ a gwara m
Ị nwere ike ịkekọrịta ụfọdụ ' akụrụngwa vidiyo mpaghara' nke ị kwuru? Ana m achọ ime vidiyo ndị ọzọ na-enweghị ike ịchọta ezigbo ndị na-ere ahịa.
Chaị! Ònye mepụtara vidiyo a? Ọ ga-amasị m izute ha. Mmadụ nwere ike iwebata m?
Jun 15, 2010 na 10:49 nke ụtụtụ
N'ebe a na Indianapolis, akụrụngwa vidiyo bụ Imavex (http://www.imavex.com), Kantalup (http://www.cantaloupe.tv), Ọzọ dị jụụ Design
Mgbasa ozi kpakpando (http://12starsmedia.com) mpaghara - ha niile na-arụ nnukwu ọrụ ma dị iche iche na ọnụahịa na ngwaahịa.
M na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ vidiyo na-akọwa ihe nke dabeere na Toronto nke a na-akpọ LaunchSpark Video, anyị achọpụtala na ọ bụghị nanị na vidiyo enyerela aka ịbawanye ahịa maka ndị ahịa anyị, kama ọ bụkwa ngwá ọrụ dị ukwuu maka atụmatụ ọgbọ ha n'ozuzu. Ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị ejirila vidiyo nkọwa ha na ihe ngosi azụmaahịa na ihe ngosi, yana site n'inye ndị na-ege ntị nkọwa ngwa ngwa nke ngwaahịa / ọrụ ha, ọ tụgharịrị ndị na-ekiri ahụ ka ha bụrụ ndị ndu. Ikike ịme vidiyo dị mfe na nke ọma n'ọtụtụ ọwa bụ ihe ọzọ na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ngwa ahịa!
Vidiyo dị mma, Fabio!